Emva kweminyaka engama-20 yoPhando lwe-FBI isemthethweni: ISaudi Arabia ayinatyala nge-11 kaSeptemba yeNkxaso yoNxunguphalo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ukwaphula iindaba zaseSaudi Arabia » Emva kweminyaka engama-20 yoPhando lwe-FBI isemthethweni: ISaudi Arabia ayinatyala nge-11 kaSeptemba yeNkxaso yoNxunguphalo
Airlines • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula iindaba zaseSaudi Arabia • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukwaphula iindaba zase-US • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Umongameli wase-US u-Biden wayehlangane noxinzelelo kwezi veki zidlulileyo kwiintsapho zexhoba, esele zifuna iirekhodi njengoko beqhubeka nomthetho eNew York bethetha ukuba amagosa aphezulu ase-Saudi Arabia ayelolunya kuhlaselo.
Nge-12 kaSeptemba 2021 inokuba ngumhla olungileyo kukhenketho lwehlabathi. Ngomhla wangoMgqibelo, nge-12 kaSeptemba 2021, i-FBI yakhupha amaxwebhu asandula ukuhlelwa ngokubhekisele kuhlaselo loloyikiso lukaSeptemba 11, 2001 e-United States.
Olu xwebhu luchaza abafowunelwa izigebenga ababenabo nabahlobo baseSaudi e-US kodwa abuniki bungqina bokuba urhulumente wase-Saudi Arabia wayelilungu lecebo.
I-FBI ikhuphe uxwebhu olunamaphepha ali-16 olusandula ukubhengezwa olunxulumene nenkxaso yamalungiselelo okunikezelwa kubaphangi ababini baseSaudi kuhlaselo lwangoSeptemba 11, 2001.
Umzi-mveliso wezohambo nokhenketho kwihlabathi jikelele nawo ubulindele le ngxelo ye-FBI ukuba ikhutshwe ukuze ikhanyise ukuba ngaba uRhulumente wase-Saudi Arabia uyabaxhasa na abagibeli kunye nabanqolobi ngoSeptemba 11, 2001.
Isizathu: I-Saudi Arabias yenkxaso yakutshanje kunye nokubonelela ngobunkokeli kukhenketho lwehlabathi.
Ukumisa cwaka ekuxhaseni nasekuqondeni Iinjongo zeSaudi Arabia ngenkxaso yayo efunekayo kukhenketho kumaxesha angenakwenzeka edlula kwi-COVID-19 pendemic ibandakanya amafu okuphumelela. Isuscpicions zavakala ngakumbi yonke imihla zikhokelela kwisikhumbuzo seminyaka engama-20 yokuhlaselwa ngo-Septemba 11.
Kwangelo xesha linye xa amawaka ezigidi kwihlabathi ekhumbula iminyaka engama-20 emva kukaSeptemba 11, umongameli wase-US u-Biden watywina isahluko sokugqibela malunga noku kunika inkululeko yamaxwebhu ophando lwe-FBI kwindima ye-Saudi Arabia- ukuba ikhona.
Ngomhla we-12 kaSeptemba emva komhla kaSeptemba 11, 2001 yayingumhla woSuku loManyano eMelika nakwilizwe eliphucukileyo
Ihlabathi latshintshela iUnited States ngoSeptemba 12,2001 ekuziseni ilizwe kunye nehlabathi kunye ngoSeptemba 12, usuku olulandelayo ngoSeptemba 11.
Namhlanje amaMelika akhunjuzwa ukuba iMelika kufuneka ime kwakhona. I-US namhlanje ifumene incasa ngendlela elingangcono ngayo ilizwe ukuba abantu banokufumana indlela yokumanyana kwakhona.
Ukukhupha amaxwebhu e-FBI yayingelilo inyathelo elilumkileyo lamanye amazwe, kodwa yayilinyathelo elibalulekileyo kwinkqubo yokuphilisa ekhaya.
Kufuneka iqatshelwe, kwiminyaka engama-20 eyadlulayo iTaliban yacela i-United States ukuba ingahlaseli i-Afghanistan. Ukungabikho kwesisombululo sezopolitiko kubangele kwimfazwe yeminyaka engama-20, kunye noloyiko loloyiko olungakumbi namhlanje.
Uxwebhu lophando lwe-FBI olukhutshwe kade namhlanje, ngoSeptemba 11,2021 luchaza abafowunelwa ababenabo nabahlobo baseSaudi eUnited States kodwa abunikeli bungqina bokuba urhulumente waseSaudi wayeyinxalenye yeli yelenqe.
Yirekhodi lokuqala lophando eliza kutyhilwa okoko uMongameli wase-US uJoe Biden wayalela ukuba kuhlolisiswe ngokutsha izinto esele zihleli zingabonwa luluntu kangangeminyaka.
Urhulumente waseSaudi kudala wakhanyela nakuphi na ukubandakanyeka. Umzi wommeli waseSaudi eWashington uthe ngolwe-Lwesithathu uyakuxhasa ukugqitywa kwazo zonke iirekhodi njengendlela "yokuphelisa izityholo ezingenasihlahla nxamnye nobukumkani kanye".
Umzi wozakuzo wathi nasiphi na isityholo sokuba iSaudi Arabia yayiyinto engekhoyo "yayiyinyani ebubuxoki".
Urhulumente waseSaudi ukwalile ukuthumela imali kwaba bantu babini babahlaseli ngoSeptemba 11, u-Khalid al-Mihdhar, ekhohlo, kunye noNawaf al-Hazmi
Umongameli wase-US u-Biden kwiveki ephelileyo wayalela iSebe lezoBulungisa nezinye ii-arhente ukuba zenze uhlolisiso lwamaxwebhu ophando kwaye zikhuphe oko zinokukwenza kwiinyanga ezintandathu ezizayo.
Amaphepha ayi-16 akhutshwa ngoMgqibelo ebusuku, kwiiyure nje emva kokuba uBiden eye kwimisitho yesikhumbuzo kaSeptemba 11 eNew York, ePennsylvania, nasemantla eVirginia. Izihlobo zexhoba bezikhe zaphikisana nobukho bukaBiden kwiminyhadala yomsitho logama amaxwebhu ahlala ehleliwe.
Ingxelo eshicilelweyo eyabhalwa ngokutsha ngoMgqibelo ichaza udliwanondlebe lowama-2015 nomntu owayefaka isicelo sokuba ngummi wase-US kwaye kwiminyaka eyadlulayo waphindaphinda ukunxibelelana nabemi baseSaudi abathi abaphandi babonelele "ngenkxaso ebonakalayo" kubaphangi abaninzi.
Ulawulo lweBiden ngoFebruwari lukhuphe uvavanyo lobukrelekrele olubandakanya iNkosana u-Mohammed bin Salman ekubulaweni kwe-2018 intatheli yase-US u-Jamal Khashoggi kodwa yagxeka i-Democrats ngokunqanda ukohlwaya ngokuthe ngqo kwenkosana yesithsaba.
Malunga ne-11 kaSeptemba, kuye kwakho intelekelelo yokubandakanyeka ngokusemthethweni ukusukela kwakamsinya emva kohlaselo, xa kwavezwa ukuba abahlaseli abali-15 kwabali-19 yayingamaSaudis. U-Osama bin Laden, inkokheli ye-al-Qaida ngelo xesha, wayevela kusapho olubalaseleyo ebukumkanini.
I-US iphande abanye oonozakuzaku baseSaudi kunye nabanye abanamaqhina kurhulumente wase-Saudi ababebazi abaxuthi emva kokuba befike e-US, ngokwamaxwebhu asele ebhengeziwe.
Okwangoku, ingxelo yeKhomishini ye-9/11 ifumene "abukho ubungqina bokuba urhulumente wase-Saudi Arabia njengeziko okanye amagosa aphezulu ase-Saudi afumana inkxaso-mali”Uhlaselo olwenziwe yi-al-Qaeda. Kodwa ikhomishini ikwaphawule "ngamathuba" okwenziwa ngurhulumente waseSaudi.
Ukujongwa ngokukodwa kugxile kubaphangi bokuqala ukufika e-US, Nawaf al-Hazmi kunye no Khalid al-Mihdhar. NgoFebruwari 2000, kwakamsinya nje emva kokufika kwabo kumazantsi eKhalifoniya, badibana kwindawo yokutyela e-halal ummi wase-Saudi ogama lingu-Omar al-Bayoumi owabancedayo ukuba bafumane kwaye baqeshise indlu eSan Diego, babenolwalamano kurhulumente wase-Saudi Arabia kwaye ngaphambili babetsala umdla wovavanyo lwe-FBI .
F18 jet jet stall esibhakabhakeni